U-Eddie Rickenbacker: iMfazwe Yehlabathi I-A
Wazalelwa ngo-Oktobha 8, 1890, njengo-Edward Reichenbacher, u-Eddie Rickenbacker wayengunyana wabemi base-Swiss abakhuluma isiJamani ababehlala eColumbus, OH. Waye esikolweni kwaze kwaba neminyaka eyi-12 xa elandela ukufa koyise, wagqiba imfundo ukuncedisa intsapho yakhe. Ukukhohlisa malunga nobudala bakhe, uRickenbacker wafumana umsebenzi kwikhishini yeglasi ngaphambi kokuba aqhubele phambili kwi-Buckeye Steel Casting Inkampani.
Imisebenzi elandelayo yayibone ukuba isebenze i-brewery, i-bowling alley, kunye nemangcwaba eqingqiweyo. Esoloko ixhomekeke ngokukhawuleza, uRickenbacker kamva wafumana ukufundela kwiivenkile zee-Pennsylvania Railroad. Ukunyuka ngokugqithiseleyo ngesantya kunye nobuchwepheshe, waqala ukuba nomdla omkhulu kwimoto. Oku kuye kwaholela ekubeni ashiye umzila weloliwe kwaye afumane umsebenzi kunye neFrayer Miller Aircooled Car Company. Njengoko izakhono zakhe zaphuhliswa, uRickenbacker waqalisa ukugijima imoto yomqeshi ngo-1910.
Umqhubi ophumelelayo, wathola isiqhankqalazo esithi "Fast Eddie" kwaye wathatha inxaxheba ekuveliseni i-Indianapolis 500 ngo-1911 xa wayekhupha u-Lee Frayer. URickenbacker wabuyela emncintiswaneni ngo-1912, ngo-1914, ngo-1915, no-1916 njengomqhubi. Ukugqibelela kwakhe okukuphela kunye nokuphela kokubeka u-10 ngowama-1914, kunye nemoto yakhe eyahlukana kwenye iminyaka. Phakathi kweempumelelo zakhe bekubekwe ugijimi we-speed speed ye-134 mph ngelixa uqhuba iBlitzen Benz.
Ngethuba lokuqhuba umqhubi wakhe, uRickenbacker wasebenza ngeendidi ezahlukeneyo zee-automobile kuhlanganise noFred no-Agasti Duesenburg kunye nokulawula iQela leMidlalo ye-Perst-O-Lite. Ukongeza kwidumo, ukugijima kwakubonakala kunenzuzo kakhulu kuRickenbacker njengoko ezuze imali engama-40,000 ngonyaka njengomqhubi. Ngethuba lakhe njengomqhubi, inomdla wakhe kwi-aircraft yanda ngenxa yeziganeko ezahlukeneyo zabaqhubi.
Ukunyamekela ubuzwe, uRickenbacker wazinikela ngokukhawuleza ngenkonzo kwi-United States yokungena kwiMfazwe Yehlabathi I. Emva kokunika isibonelelo sakhe sokwenza iqela lokulwa lomqhubi wemoto, wenqatshelwe nguMajer Lewis Burgess ukuba abe ngumqhubi womntu we-American Expeditionary Force, uJohn J. Pershing . Kwakuye ngeli xesha uRickenbacker wachaza igama lakhe lokugqibela ukuze agweme ukulwa noJamani. Ukufika eFransi ngoJuni 26, 1917, waqalisa umsebenzi njengomqhubi kaPerhing. Wayesenomdla kwinqwelo-moya, waxhatshazwa kukuba wayengenakho imfundo yekholeji kunye nengqiqo yokuba wayenalo ikhono lokufunda ukuphumelela ekuqeqesheni iindiza. U-Rickenbacker wafumana ikhefu xa ecelwa ukuba alungise imoto yintloko ye-US Army Air Service, uColonel Billy Mitchell .
Nangona wayeqwalaselwa endala (wayeneminyaka engama-27) yokuqeqeshwa kwendiza, uMitchell walungiselela ukuba athunyelwe esikolweni se-flight esikolweni sase-Issoudun. Ukuhamba ngethuba loqeqesho, uRickenbacker wathunyelwa njengomloli wenkundla yokuqala ngo-Oktobha 11, 1917. Ekugqityiwe koqeqesho, wagcinwa kwiziko le-3 loLwazi lokuThuthwa kweeNqila e-Issoudun njengegosa lobunjineli ngenxa yezakhono zakhe.
Ukhuthazwe ukuba abe ngumphathi ngo-Oktobha 28, uMitchell wayeneRickenbacker njengomphathi oyintloko wegosaji. Uvumelekile ukuba aphephe ngexesha lokuchitha iiyure, wayenqatshelwe ukungena emfazweni.
Ngalolu daba, uRickenbacker wakwazi ukuya e-Cazeau ngoJanuwari 1918 kunye nokuqeqeshwa okuphambili kwinyanga emva kweVilleneuve-les-Vertus. Emva kokufumana indawo efanelekileyo yokutshintshwa, wafaka isicelo kuMajar Carl Spaatz imvume yokujoyina i-unit ye-US entsha yokulwa, i-94 Aero Squadron. Esi sicelo sanikezwa kwaye uRickenbacker wafika ngaphambili ngo-Ephreli 1918. Eyaziwayo ngokuba "iHat in the Ring" eyahlukileyo, i-Aero Squadron ye-94 iyakuba yinye yezona ziqhelo ezidumileyo zaseMelika zengquzulwano kwaye zazibandakanya abaqhubi bee-pilot ezifana noRaoul Lufbery , UDouglas Campbell, noReed M.
Ukuhamba ngemisebenzi yakhe yokuqala ngomhla ka-Ephreli 6, 1918, kunye nenkampani yamagorha uMajor Lufbery, uRickenbacker uya kuhamba ngeeyure ezingama-300 zokulwa emoyeni. Ngethuba lexesha elidlulileyo, amaxesha angama-94 adibana ne "Flying Circus" ebizwa ngokuba yi "Red Baron," uManfred von Richthofen . Ngo-Apreli 26, ngelixa ehamba ngeNieuport 28, uRickenbacker waqala ukuphumelela xa ehlalisa i-Pfalz yesiJamani. Wafinyelela isimo seAce ngoMeyi 30 emva kokuhlalisa amaJamani amabini ngosuku.
Ngo-Agasti i-94 yatshintshela kwi- SPAD S.XIII entsha, enamandla. Kule moya entsha uRickenbacker waqhubeka ekongeza kwixabiso lakhe kwaye ngoSeptemba 24 wakhuthazwa ukuba alele i-squadron kunye negosa lomphathi. Ngomhla we-Oktobha 30, uRickenbacker wehla iinqwelo zakhe ezingamashumi amabini anesithandathu kunye neyokugqibela eyenzela ukuba ngumqhubi omkhulu waseMerika wemfazwe. Emva kokumenyezelwa kwe-armistice, wawela phezu kwemizila ukujonga imibhiyozo.
Ebuyela ekhaya, waba yip aviator ejongwe kakhulu eMelika. Ngebudeni beemfazwe, uRickenbacker wehla eziliqela ezilishumi elinesixhenxe zeentshaba, iinqwelo ezine zokubonga, kunye neebhaluni ezihlanu. Ekuqapheliseni iimpumelelo zakhe, wafumana iSigqeba soNxibelelwano seNgcaciso irekhodi ngezihlandlo ezisibhozo kunye neFrench Croix de Guerre kunye neLegion of Respect. NgoNovemba 6, 1930, uMnqamlezo oPhezulu weNkonzo owawuthola ukuhlaselwa kweenqwelo-moya ezisixhenxe zaseJamani (phantsi kwembini) ngoSeptemba 25, 1918, waphakanyiswa kwiMedal of Honor ngoMongameli uHerbert Hoover. Ukubuyela eUnited States, uRickenbacker wakhonza njengesithethi kwiholide yeBhodi yokuBala ngaphambi kokubhala iimemori zakhe ezibizwa ngokuba yi- Fighting the Flying Circus .
Ukubeka ubomi obusemva kwempi, uRickenbacker watshata no-Adelaide Frost ngowe-1922. Esi sibini saza samkela abantwana ababini, uDavid (1925) noWilliam (1928). Ngaloo nyaka, waqala uRickenbacker Motors kunye noByron F. Everitt, uHarry Cunningham, kunye noWalter Flanders njengeziqabane. Ukusebenzisa i-Hat in Ring "94" ekuthengiseni iimoto zayo, uRickenbacker Motors wayefuna ukufezekisa injongo yokuzisa i-teknoloji ephuhlisiwe kwi-industry auto. Nangona ngokukhawuleza waxoshwa kwishishini ngabavelisi abakhulu, uRickenbacker waba nguvulindlela ohambela phambili ekugqibeleni wabanjwa njenge-braking ezine. Ngowe-1927, wathenga i-Indianapolis Motor Speedway i-$ 700,000 waza wazisa ii-curve zebhanki ngelixa kuphuculwe kakhulu izibonelelo.
Ukuqhuba umzila kude kube ngo-1941, uRickenbacker wavala ngexesha leMfazwe Yehlabathi II . Ekupheleni kombambano, wayengenalo izixhobo zokwenza ukulungiswa okuyimfuneko aze athengise umzila ku-Anton Hulman, Jr. Ukuqhubeka nokuxhamla kwakhe kwinqwelo-moya, uRickenbacker wathenga i-Eastern Air Lines ngo-1938. Ukuthetha kunye noburhulumente-federal ukuthenga iindlela ze-imeyile, Wabuya wabuyela ngendlela iindwendwe zeenqwelo-moya ezisebenza ngayo. Ngethuba lokuhlala kwakhe eMpuma wajonga ukukhula kenkampani kumntu omncinci omncinci ukuya kwelinye elinempembelelo kwinqanaba likazwelonke. NgoFebruwari 26, 1941, uRickenbacker wayephantse ukubulawa xa i-Eastern DC-3 apho ephaphazelayo yaphahlazeka ngaphandle kweAtlanta. Ukubandezeleka kwamathambo amanqabileyo, isandla esiphene, kunye neliso elishiyekile, wachitha inyanga esibhedlele kodwa wabuya wabuyela.
IMfazwe Yehlabathi II
Ngokuqhambuka kweMfazwe yehlabathi II, uRickenbacker wanikela ngenkonzo yakhe kurhulumente. Ngesicelo sikaNobhala weMfazwe uHenry L. Stimson, uRickenbacker watyelela iintlobo ezahlukahlukeneyo ze-Allied eYurophu ukuvavanya ukusebenza kwazo. Evezwe yizinto ezifunyenweyo, uSolmson wamthuma ePacific ngendlela efana nohambo kunye nokuhambisa umyalezo oyimfihlakalo kuGeneral Douglas MacArthur ngokumsola ngenxa yezimvo ezingamanga azenzileyo ngolawulo lweRoosevelt.
Endleleni ngo-Oktobha 1942, i- B-17 yeFlying Fortress eRickenbacker yayingene e-Pacific ngenxa yezixhobo zokuhamba eziphosakeleyo. I-Adrift iintsuku ezingama-24, uRickenbacker wabakhokelela abasindileyo ekubambeni ukutya kunye namanzi de bafunyanwe yi-US Navy OS2U Kingfisher kufuphi neNukufetau. Ukubuyisela kumxube wokushisa ilanga, ukungcoliswa kwamanzi, kunye nendlala-njala, wagqiba umsebenzi wakhe ngaphambi kokuba abuyele ekhaya.
Ngomnyaka we-1943, uRickenbacker wacela imvume yokuya eSoviet Union ukuze ancede ngeenqwelo zabo zaseMelika kunye nokuvavanya amandla abo empi. Oku kwavunyelwa kwaye wafikelela eRashiya ngeAfrika, eChina naseIndiya ngendlela eye yaphayona ngoMpuma. Ukuhlonishwa yimikhosi yamaSoviet, uRickenbacker wenza iziphakamiso ezibhekiselele kwinqwelo-moya eyenziwe nge- Lend-Lease kunye nokujonga i-Ilyushin Il-2 Sturmovik factory. Nangona ephumelele ukufeza umsebenzi wakhe, uhambo luyakhumbula kangangoko ngenxa yesiphoso sakhe ekumiseni iiSoviet kwi-secret B-29 Superfortress projekthi. Ngenxa yeminikelo yakhe ngexesha lemfazwe, uRickenbacker wathola iMedal of Merit.
Xa imfazwe iphelile, uRickenbacker wabuyela eMpuma. Wahlala ephethe i nkampani kwaze kwaba yilapho isikhundla sayo saqala ukuphazamiseka ngenxa yenkxaso-mali kwezinye iinqwelo-moya kunye nokungafuni ukufumana ii-aircraft. Ngo-Oktobha 1, 1959, uRickenbacker waphoqelelwa esikhundleni sakhe njenge-CEO waza watshatyalaliswa nguMalcolm A. MacIntyre. Nangona ekhutshwe kwindawo yakhe yangaphambili, wahlala njengosihlalo webhodi kwada kwaDisemba 31, 1963. Ngoku, u-Rickenbacker nomfazi wakhe bathe baqala ukuhamba emhlabeni befumana umhlalaphantsi. I-aviator eyaziwayo yafa eZurich, eSwitzerland ngoJulayi 27, 1973, emva kokuxhwaleka.
Quadri Duncan Quotes
Imfazwe Yehlabathi II / Imfazwe yaseKorea: uLieutenant General Lewis "Chesty"
I-Aviation Military: I-General Brigadier General Billy Mitchell
AbaPhathiswa beNtloko baBhinqa kunye noongameli: I-20 yeXesha leNkulungwane
IMfazwe yaseVietnam: UBrigadier General Robin Olds
I-Dinosaurs ezili-10 ezibi kakhulu
Iikhosi zeeholide neeMithendeleko
Khusela I-Classic Yakho Kusuka kwi-Overheating
UAlbert Camus: Ukholo kunye ne-Absurdism
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uSebe Stuart
Iintlanganiso ezine zokuThembela
ITrereau ekhulwini lama-21: Ngaba i-Walden ingaqhubeka isithetha nathi namhlanje?
Cinga ngomsebenzi kwiNkonzo zoLuntu
Ukusetyenziswa kunye neMbali yeJadi ye-Precolumbian
I-Srotapanna: I-Entry Stream
Ukuphazamiseka Kwegama leBiology
Yintoni i-Psychic Empath?
UHenry Louis Wallace
Iibhanki zeBhanki kunye neZoshishino zabafundi beNgesi